Xildhibaanada kasoo jeeda Puntland ee DF Soomaaliya oo kuhanjabay in ay ka baxayaan Baarlamaanka Faderaalka.
February 3, 2020 NEWS 6
MUQDISHO(P-TIMES) – Mudanayaal katirsan baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada Puntland ayaa cambaareeyey hadalkii kasoo yeeray wasiirka Waxbarashada ee dawladda Faderaalka Goodax Barre oo uu ku cadeeyey in aysan marnaba raali ka noqon doonin Shahaado la siiyo Puntland.
Puntland ayaa iska diiday galida Imtixaanka Shahaadiga ah ee ay diyaarisay Soomaaliya, taas bedelkeedana waxay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya hakisay in ay Shahaado helaan Ardayda Puntland.
Xildhibaanadan oo ah kuwa taageersan siyaasadda Madaxweynaha Puntland, mucaaradna ku ah Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay dareensan yihiin sida wax ku socdaan in aysan sax aheyn.
Xildhibaanada mucaaradka u badan ayaa sheegay in qorshaha xanibaada Shahaadada ay tahay mid la siyaasadeeyey, marnaba ma aysan soo qaadin geedi socodkii ay arrimahan soo mareen, sidaas oo kalena ma aysan eegin daruufaha waqtigan taagan.
Qaar kamid ah ayaa ku hanjabay in ay ka baxayaan baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya, taas oo ay dad badan u arkayaan mid ay ku muujinayaan Ole-olaha ay ugu jiraan sidii ay markale ugu soo laaban lahaayeen kuraasta.
Puntland ayaan wali si rasmi ah uga jawaabin arrimaha Shahaadada Waxbarashada, waxaana muuqata in ay dhinacyadu isku hayaan arrimaha mashaariicda ay bixiyaan dalalka Reer Yurub, taas oo ay Puntland hesho qoondo badan.
Warsidaha Puntlandtimes ayaa bishii September 2019-kii baahiyey macluumaad ku saleysan ujeedada xanibaada Shahaadada iyo doorka ay kala joogaan dhinacyada, waxaana muuqda in ay markale arrintan xiisad gaar ah kicin doonto.
Puntlandtimes sidaad wax u sheegaysaan ma aha kuwa mucaarad ah laakiin waxay arkeen in Puntland saxan tahay, Farmaajona qaldan yahay raalina ka yahay dhibaatada iyo cayda Puntland.
Sidee dal aan manhajkiisu midaysnayn loo midayn karma imtixaankiisa?
Your stupid Xarmaajo xoogaa ka qaata adeer qofkii runta sheegaa ma mucaarad baa. Waxaa cad inaad leef leef ka qaadataan kooxda ndbar iyo naxdin oo aad tihiin cadowga Puntland. Waa laydin ogyahay waxaad tihiin ee magaca noo dhiga daanyeer yahay tuugada ahi.
Waxaa qorteen Puntland oo iska diiday gelitaanka imtixaanka, waxaa muuqata in puntlandtimes lagu adeeganayo oo xoogaa shilimaan ah la siiyay, iyaga oo weliba xildhibaanada la dhiidhiyay in reer Puntland laga dhexkaluumaysto kuwa raba in dib loo soo doorto.
Maxay ku kala duwan yihiin reer Puntland iyo SOMALILAND.
Maxaa Guulwade loo casilay markii uu runta sheegay oo farmaajo uga aamusay hadalkii gefka ahaa ee Goodax Barre.
Wallaanay dhacayn dawladnimo bug ah oo Casuumadii keli ka shaqayn weyday in lagu caburiyo umadda Soomaaliyeed ee kuwa Puntland ka midka yihiin.
Markii maamuladii ka dacwoodeen in deeqihii loogu soo dhiibay u diideen,shuruudna oga dhigeen khasab iigu hogaansama sharci darro,codsadena in woxooda toos loo siiyo ayay Puntland gaar u abaareen,oo siyaasadeeyeen waxbarashadii ubadka Soomaaliyeed.
Maxay tahay dawladaan bugta ah iyo dhaqaalahaan caalamka iyo sharciyada umada ka dhaxeyso ee laygu hadidaayo ee laygu dhibaayo?
Halaga tashto maafiyada oo kuwaan saqajaamiinta ahina ha difaacaan shacabkooda looga aarsanayo wax ayaka dhiseen oo maanta dad kale ka dhergeen mabfaceedii anakiina la nagu dhibaataynaayo.
Halkaa rajo ma lahan ee xal kale ha la raadsho oo hadii laga fursan waayo aan ka goosano illeen faaido kuma qabnee.
Waxay ahayd in Puntland iyo shacabkeeda looga abaal gudo in ayaka soo celiyeen xukuumad Ku shaqaysa Madaxtooyada Muqdisha,ilayska baxayana ayaka lahaayeen laakiin laga abaal dhacay in wax loo taro daayee oo xaq u lahaayeen.
Garoowe1&2 waa la ogaa,tastuurka waa loo sameeyay
Muxuu aniga oo 21 Sano maamul iyo nidaam haystay ii sheegi mooryaan shalay duurka kasoo baxay oo nidaam aqoon?
Shahaando iyo waxaas waa khayaal,ee dagaalka lagu hayo Puntland waa mid fog oo cuqdo salka Ku haya.
Xarirka haloo gooyo bal in wax inaga dhumaan tuugadaan isbaaradii u bedelay mid maamulada loo dhigto oo lagu burburiyo.
Shahaado majeerteen ku qoran caruurta siista, illeyn imtixaanka hawiye dejiyey gudbi maysaane.
Kkkkkkkk qof Soo fadhiya oo laga been sheegayo wariye Xildhibaanada hadal koodu Saad u qodhay waa ka duwan yahay